मान्यताप्राप्त दलाल - परिहास - नेपाल
अचेल यातायात व्यवस्था कार्यालयनजिक जानै हुन्न, कागले सिनो झम्टेजसरी आइपुग्छन् दलालहरु । पहिलापहिला लुकीचोरी हुने काम अहिले खुलेआम गर्छन् । सबै कामको जिम्मा लिन्छन् । सेवा शुल्क माग्छन् । मागेको शुल्क गोजीमा हालिसकेपछि भन्छन्, ‘अब तपाईंको काम पक्का ।’
हुन पनि सरकारी कार्यालयमा सोझै सम्पर्क गरे काम हुने–नहुने ठेगान छैन । तर, दलालमार्फत गए पक्का । यस्तो ग्यारेन्टीवाला सेवा सम्भवत: नेपालमा अरु छैन । आखिर यो कसरी सम्भव भयो ? दलालहरुको साझा स्वर छ, ‘हामी मान्यताप्राप्त दलाल हौँ ।’
कसरी ? दलाल पनि कसरी मान्यताप्राप्त हुन्छ ? के यो सेयर बजार हो र ? दलालको दलील छ, ‘अरु सेवाको गुणस्तर आईएसओ प्रमाणपत्रबाट थाहा लाग्छ । तर, हाम्रो सेवालाई अदालतले नै प्रमाणित गरिदिएको रहेछ ।’
एकछिन त यो रुन्चेलाई कुरा नबुझेर रनाहा नै भयो । बुझ्दै जाँदा थाहा भो, एकान्तकुनातिरका दलाललाई अख्तियारले अदालतमा बुझाएछ । नक्कली लाइसेन्स बनाएको, कर्मचारीका निम्ति घूस उठाइदिएको लगायतका आरोपको ठेलीसहित । अदालतले अख्तियारको आरोपलाई खारेज गरिदियो । दलालको कर्मलाई कानुनी छाप लगाइदियो । अनि, भएन त मान्यताप्राप्त दलाल ?
रुन्चे त ठाउँको ठाउँ सेन्टीफ्ल्याट ।